Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Sajid Mir
Sajid Mir, oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka argagixisada ajaanibta ah ee fadhigiisu yahay Pakistan Lashkar-e-Tayyiba (LeT), ayaa loo raadinayaa maadaama uu qayb ka ahaa ​​weeraradii argagixiso ee bishii Noofambar 2008 ka dhacay Mumbai, India. Barnaamijka “Rewards for Justice (Abaal Marinta Cadaalada)” wuxuu bixinayaa abaalmarin gaareysa ilaa $5 milyan cidii keenta macluumaad u horseedaya xiritaanka iyo xukunka Sajid Mir dalkuu doono ha joogee, macluumaadkaas oo la xiriira doorkii uu ku lahaa weeraradan.
Laga bilaabo Nofeembar 26, 2008, illaa Nofeembar 28, 2008, toban weeraryahanno ah oo soo tababartay LeT ayaa qaaday weeraro isdaba-joog ah oo ka dhan ah bartilmaameedyo badan oo ku yaal Mumbai, India, oo ay ku jiraan laba hudheel oo qaali ah (Taj Mahal Palace iyo The Oberoi), Leopold Café, Nariman (Chabad) House, iyo xarunta tareenka ee Chhatrapati Shivaji Terminus, halkaas oo ay ku dileen qiyaastii 170 qof. Lix qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay intii uu socday weerarka: Ben Zion Chroman, Gavriel Holtzberg, Sandeep Jeswani, Alan Scherr, Naomi Scherr, iyo Aryeh Leibish Teitelbaum.
Sajid Mir wuxuu ahaa maamulaha howlaha LeT ee weerarkii Mumbai, isagoo door hogaamineed ka ciyaaray qorshaynta, diyaarinta, iyo fulinta weerarka. Mir waxaa dacwad loogu soo oogay Maxkamad Degmo oo Mareykan ku taal, Degmada Waqooyiga ee Illinois, Qeybta Bariga (Chicago, Illinois) markay ahayd 21-kii Abriil, 2011, waxaana lagu soo oogay: shirqool lagu dhaawacay hantida dowlad shisheeye; taageero dhaqaale inuu siiyey argagixisada; gacan ka geysashada dilka muwaadin meel ka baxsan Mareykanka; iyo duqeynta goobo dadweyne. Sida ku xusan eedeynta, intii uu socday weerarku Mir wuxuu kula taliyay kuwa weerarka soo qaaday inay dilaan la haystayaasha, dab qabadsiiyaan goobaha, bambooyinna ku tuuraan sidoo kale wuxuu dalbaday in lahaystayaasha weerarkaas bedelkooda loo soo daayo qof dadka weerarka waday ka mid ah oo la qabtay. Warqad lagu soo xirayo Mir ayaa la soo saaray 22-kii Abriil, 2011. Sannadkii 2019-kii, Mir waxaa lagu daray Liiska Argagixisada ee FBI-da ay aadka u doondoonayaan.
Markay ahayd 30 Ogoosto 2012, Waaxda Hanti-dhowrka waxay Mir ku magacaawday iyadoo la raacayo Amarka Fulinta 13224 inuu jagooyin hoggaamineed ka soo qabtay LeT. Sida laga soo xigtay Waaxda Hanti-dhowrka Mareykanka, laga soo bilaabo 2005, Mir wuxuu tababbar u qabtay hawl-wadeennada isagoo u diyaarinaya shaqaaleysiin, lacagaha sharci darada wadamada loogu gudbiyo, iyo qorshaynta hawlgalada. LeT waxaa Waaxda Arimaha Dibada ee Mareykanka u aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso oo ajnabi ah bishii Diseembar 2001.